Chloride amoniaka, Chloride Benzalkonium - CHEM-PHARM
milina fanafody sy fitaovana famonosana
Discount Big Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride ...
Ny SJZ Chem-Pharm Co., Ltd. dia miorina eo afovoan'ny tanàna Shijiazhuang, renivohitry ny faritanin'i Hebei. indrindra ny fifanakalozana zavatra simika, mpanelanelana amin'ny fanafody, fitrandrahana biby sy zavamaniry sns, dia mahatratra 30 000 000 dolara amerikana isan-taona.
Mifikitra amin'ny toe-tsaina "mifantoka amin'ny finoana tsara, manavao hatrany ny fotoana maharitra", ny orinasanay dia nametraka fifandraisana ara-barotra malalaka sy sariaka amin'ny firenena sy faritra 60 manerantany.
Aza misalasala mifandray aminay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa.
Mpikambana ao amin'ny CCPIT
INSURANS CREDIT "AAA" SINOSURE
Ny vaovaon'ny orinasanay
Ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD dia nandray anjara tamin'ny ...
Miaraka amin'ny lohahevitra "Fiaraha-miasa eo an-toerana ny firenena sinoa-afovoany sy atsinanana eropeana. Fotoana vaovao, sehatra vaovao ....
Asa fanitarana ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-A ...
Asa fanitarana ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Fitsangatsanganana tany Jiulongtan Tamin'ny 31 Oktobra 2019, tamin'ity vanim-potoana fararano volamena ity, ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD dia nandamina mpiasa hanao hetsika fihanihana tendrombohitra sy fampandrosoana any amin'ny Jiulongtan Scenic Area ...
SJZ CHEM-PHARM CO., LTD dia nandray anjara tamin'ny Interna ...
Ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD dia nandray anjara tamin'ny foara ara-toekarena sy varotra iraisam-pirenena any amin'ny faritanin'i Hebei. Miaraka amin'ny lohahevitra "Fiaraha-miasa eo an-toerana ny firenena sinoa-afovoany sy atsinanana eropeana, ny fotoana vaovao, ny sehatra vaovao, ny habakabaka vaovao", ny afovoany sinoa-afovoany ...
Mpiasa miavaka Celebarate Taom-baovao '...
Mpiasa miavaka Celebarate Taom-baovao any Sanya Eo ambanin'ny fandaminana malina sy feno ataon'ny orinasa, ny 28 Desambra, nandamina mpiasa miavaka ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD nankany Sanya, Hainan, ary nanomboka nanao dia dimy andro nankany amin'ny col .. .